ငါတို့က မြန်မာ . . . . အမေစုက ဘားမား
ရှေးပဝေသနီကတည်းက ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှာန်းနဲ့ ထည်ဝါခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်စိုးလိုက်ကတည်းက ဘာသာ၊ သာသနာ မတိမ်ကောအောင်၊ လူမျိုး မတိမ်ကောအောင် အမျိုးသားရေးအသိနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းထိမ်းသိမ်းခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို အားမနာဘဲ အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို ဦးတည်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့အထဲက လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖောက်ထွက်ပြီး ဥရောပတစ်လွှားမှာ မြန်မာကို ဘားမားဟေ့ လို့ လိုက်အော် နေတာကိုကြားရတော့ စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ လူမျိုးပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါလားလို့ သံသယတွေ ၀င်မိပါတယ်။
လွှတ်တော်အမတ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာကို နားမလည်ဘဲနဲ့ စကားပြောတိုင်း ဘားမား ဘားမားနဲ့ မဲမှား ပေးခဲ့သလားမှတ်ရအောင် စကားလေးတစ်လုံးကိုကအစ မှားနေတော့ ဘယ်လူမျိုးတွေ ကောင်းစားဖို့အတွက် လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ခဲ့တာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လား . . . ဘားမားအတွက်လား ဥရောပတလွှားလှည့်ပြီး ဘေးကသတင်းထောက်တွေ ပြောနေတဲ့ မြန်မာ ဆိုတာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ ဘားမား လုပ်နေလိုက်တာ။ မြန်မာနိုင်ငံက အစဉ်အဆက် သုံးစွဲခဲ့တဲ့ မြန်မာ ဆိုတာကို ဘားမားလို့ အင်္ဂလိပ်သံယောင်လိုက်ပြောနေတာတွေက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအလယ်မှာ ရှက်စရာ . . . အမေစု ဥရောပမှာ ပြောနေတာတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရပါတယ် . . ပြီးတော့ ဘားမား ဘားမားနဲ့ပြောနေတော့ စင်ပေါ်မှာ အရှက်ရစရာ မြန်မြန်ပြန်ဆင်းလာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
ဘယ်သိမလဲ . . . အမေစုရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပြည်ပမှာနေလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်လာပြန်တော့လည်း အကျဉ်းစံဘ၀နဲ့။ ဒါကိုတောင် မြန်မာအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ရဲတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နားမလည်။ နားလည်အောင်လည်းဖတ်မကြည့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရဲ့ ပထမဆုံးစာမျက်နှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာကိုတောင် ဖတ်ကြည့်ဖူးရဲ့လား မသိဘူး။ မဲတစ်ပြားက အမေစုအတွက် ဖြစ်ပေမဲ့ အမေစု ကဘားမားပဲ လုပ်နေတော့ အရမ်း စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက အတူတူဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရော တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပါတီဝင်တွေ အကုန်လုံးက မြန်မာ လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတဲ့အချိန်မှာ အမေစုက ဥရောပမှာ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့ ဘာမား လို့ ပြောဆိုနေတာတွေက တစ်နိုင်ငံလုံးကို အရင်ကသူ့ကျွန်ဘ၀ကို ပြန်ပြီးရောက်နေရသလို အလိုလို ခံစားလာရပါတယ်။
အမေစုပြောနေတဲ့ အသံထွက်တွေက ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေနဲ့ လားလားမှ မကိုက်ညီပါဘူး။ အမေစုရဲ့ ဘားမားအသံထွက် တစ်ချက်တိုင်းဟာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်ရည်တစ်စက်လို ၀မ်းနည်းရပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရက်နဲ့ ပြောထွက်လိုက်တာ။ တစ်နိုင်ငံလုံး အောက်ကျ နောက်ကျဖြစ်ရတယ်။ ဥရောပက မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာမရှိဘူး။ ဘားမား နိုင်ငံပါလို့ အထင်မှား ရောက်အောင်များ လုပ်ကြံပြောနေတာလား အမေစုရယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေကို အမွှမ်းတင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုကိုယ် မြှင့်တင်ဖို့မကြိုးစားဘဲ မြန်မာကို ဘားမားလို့ နှိမ့်ချနေတဲ့ အမေစုရဲ့အပြောတွေက အရင် စည်းရုံးရေးဆင်းတုန်းက လေသံတွေနဲ့ တခြားစီလို့ထင်မိပါတယ်။
အမေစုရေ . . . အမေစုသိအောင်တော့ အမေစုပြောတဲ့ ဘားမားအကြောင်းကို အချိန်မှီ သတိထားနိုင်အောင် အမေစုရဲ့ အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းပြောရဲရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေးက၀င်လာလို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ် . . အမေစုပြန်လာရင်တော့ လေဆိပ်က စောင့်ကြိုပြီး အမေစုရေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာတာလား . . ဘားမားပြည်ကို ပြန်လာတာလားမေးပြီး ဘားမားဆီကို ပြန်လာတာဆိုရင်တော့ အမေစုလာတဲ့လေယျာဉ်နဲ့ ပြန်တင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ လေဆိပ်က စောင့်ကြိုနေပါ့မယ် . . . .။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 21:20 1 comment: